सामुदायिक विद्यालयमा दलका वफादार कार्यकर्ता ! गुणस्तर खस्कदों | EduKhabar
सामुदायिक विद्यालयमा दलका वफादार कार्यकर्ता ! गुणस्तर खस्कदों
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कदो क्रममा छ । औंलामा गन्न सकिने केही सामुदायिक विद्यालयहरुले अपेक्षाकृत प्रगति गरेको भए पनि अधिकाँश विद्यालयहरुको स्थिति निराशाजनक देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमका अनुसार बालविकास हुँदै कक्षा दुईमा पुगेका झण्डै पचास प्रतिशत विद्यार्थी नेपाली अक्षर नै पढ्न सक्दैनन् !
तिन बर्ष विद्यालय शिक्षा लिएका बालबालिकाहरुले नेपाली अक्षर पढ्न नसक्नु लाजमर्दाे विषय हो । यस तथ्यले पनि सामुदायिक विद्यालयको गिर्दाे अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ । यसै मेसोमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विभिन्न प्रयासहरु पनि भइ नै रहेका छन् । कतै सरकारी स्तरबाट । कतै स्थानीय सरोकारवालाहरुको तहबाट पनि । तर, अपेक्षित सुधार हुन भने सकिरहेको छैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउन नसकेर नै निजी विद्यालयहरु मौलाइरहेका हुन् भन्ने तर्क पनि सघन रुपमा उठीरहेको छ । यो तर्क आफैमा मनन् योग्य पनि देखिन्छ । स्वीकार योग्य पनि । एकातिर सामुदायिक विद्यालयहरुमा बर्षेनी विद्यार्थी घटिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ भने अर्काे तिर अत्यधिक शूल्क बृद्धि हुँदा पनि निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढिरहेको पाइन्छ !
निजि विद्यालय राम्रो भएर होइन, सामुदायिक विद्यालय विग्रेर नै आफ्ना बालबालिकाहरुलाई निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् अभिभावक । शैक्षिक सत्र २०७४ मा मात्र सामुदायिक विद्यालयबाट दुईलाख सत्ताइस हजार विद्यार्थीले बिचैमा विद्यालय छोडेको तथ्यांकले देखाउँछ । विगत पाँचबर्षमा सात सय त्रिपन्न सामुदायिक विद्यालयहरु विद्यार्थीको अभावमा समायोजन (Merging) भइसकेका छन् । विद्यार्थी अभावमा समायोजन हुने प्रक्रियामा पनि सैयौं विद्यालयहरु रहेको देखिन्छ । यो क्रम बर्षेनी बढ्ने निश्चित छ । आखिर किन सामुदायिक विद्यालयहरु अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइमा परेनन् त ? विभिन्न प्रयासको बाबजुद पनि किन सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार भइरहेको छैन ? सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ? यी विषयहरुमा सरोकारवालाहरुको गम्भिरतापूर्वक ध्यान आकृष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं शंसोधनले शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता भएर राजनीति गर्न नपाउने व्यवस्था ल्यायो । यसै पृष्ठभूमिमा “राजनीति गर्ने शिक्षकको जागिर चट्” भनेर पनि छापाहरु भरिए । शिक्षा मन्त्री देखि प्रधानमन्त्रीसम्मले शिक्षकले राजनीति गर्न नपाउने तथा राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कार्वाही गरिने फर्मान पनि गरे । यस व्यवस्था सम्बन्धमा पक्ष र विपक्षमा आआफ्ना तर्कहरु समेटिएका विचारहरु प्रकट गरिए । राजनीतिक परिवर्तनका सम्बाहक शिक्षकहरुले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्बाह गरेको इतिहास नविर्सन राजनीतिक दलका नेताहरुलाई शिक्षक नेताले अनुरोध पनि गरे । शिक्षक नेताहरुले संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारलाई अंकुश लगाउने प्रपञ्च नगर्न चुनौति पनि दिए । तर, राजनीतिक कोर्षले एउटा गन्तव्य पूरा गरिसकेको नेपालको परिवेशमा शिक्षकले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भइरहन आवश्यक छैन भन्ने आवाजहरु पनि मुखरित भए । भइरहेका छन् ।
राजनीति गतिविधिमा शिक्षक सक्रिय हुँदा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुन्छ नै । तर, केही शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक संघ÷संगठनहरुले यस व्यवस्थाको विरोध मात्र गरेनन् सक्रिय राजनीति गर्न पाउनुपर्ने अभिव्यक्ति पनि दिए । बस्तुतः यो व्यवस्था केवल कागजी नियम मात्र बन्न पुग्यो र व्यवहारमा लागू भएन । अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयका ठूलो संख्याका शिक्षकहरु राजनीतिक दलका कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेको पाइन्छ । सक्रिय कार्यकर्ताको रुपमा दलका विभिन्न गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षकको संख्या झन् बढि रहेको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसल र अन्य सार्वजनिक स्थलमा समेत शिक्षकहरु राजनीतिक नेता÷कार्यकर्ताकै हैसियतमा राजनीतिक बहस गर्छन् । पक्ष र विपक्षमा तर्क गर्छन् । विद्यालयमा समेत पठनपाठन तथा शैक्षिक सुधारमा भन्दा राजनीतिक गतिविधि र राजनीतिक दलहरुको पक्ष÷विपक्षमा बादविवाद हुने गरेको देखिन्छ । आफ्ना दल आवद्ध नेताहरुको संरक्षणमा र आफ्ना आस्था इतर दलका विपक्षमा टिकाटिप्पणी गर्नु नै आफ्नो कर्तव्य हो भन्ने मानसिकता समेत विकास भएको पाइन्छ कतिपय शिक्षकहरुमा । यस्तो लाग्छ– यी शिक्षक नै होइनन् । कुनै अमुक राजनीतिक दलका वफादार कार्यकर्ता हुन् । शिक्षण सिकाइ यिनको दायित्व नै होइन । आफ्नो दल र दलको नेताको गुलामी गर्नु, भक्तिभाव गर्नु नै यिनको दायित्व हो ।
विभिन्न राजनीतिक दलसंग आवद्ध कार्यकर्तारुपी शिक्षकलाई आफ्ना दल निकट प्रभावशाली नेताको आडमा विद्यालय नगए पनि कुनै कार्वाही हँुदैन । आफू अनुकूल सरुवा, बढुवा तथा अन्य सेवासुविधामा समेत त्यस्तै शिक्षकहरुको हाली मुहाली हुदाँ कर्तव्यनिष्ठ एवम् इमान्दार शिक्षकको मनोवलमा समेत नकारात्मक असर पर्ने गरेको देखिन्छ । राजनीति गर्ने शिक्षक विद्यालयमा नियमित आउँदैनन् । यसो हुँदा पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको विषयवस्तुको पठनपाठन पूरा हुन सक्ने कुरै भएन । शिक्षकको अनियमितता कै कारण निर्वादरुपमा पढ्न पाउने अधिकारबाट पनि बञ्चित भएका छन् लाखौं अबोध बालबालिकाहरु । यस्तो परिस्थितिमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार सम्भव हुने कुरै भएन ।
त्यसो त राजनीति गर्ने शिक्षकलाई संरक्षण गर्ने काम पनि दलका नेताहरुबाटै भएको देखिन्छ । आफ्नो दल निकटका शिक्षकले जे जस्ता बद्मासी गरे पनि जोगाउने काम पनि भइनै रहेको छ । कुनै कार्वाहीको भागिदार बन्न पर्दैन त्यस्ता शिक्षक÷प्रधानाध्यापकहरुले । कतिपय सक्रिय राजनीतिमा लागेका शिक्षकहरुको अधिकांश समय विद्यालयमा भन्दा दलका पार्टी कार्यालय र अन्य राजनीतिक सभा सम्मेलनमा नै व्यस्त देखिन्छ । अहिले कतिपय स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुबाट समेत आफ्नो दल निकटको शिक्षकलाई संरक्षण गर्ने र दल इतरको शिक्षकलाई पेल्ने काम भइरहेको पाइन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु त झन् विद्यालयको व्यवस्थापकिय पक्ष सम्हाल्न भन्दा राजनीति गर्नैका लागि क्रियाशील भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै राजनीतिक नेता÷कार्यकर्ताको रुपमा आफू अनुकूलका शिक्षकलाई नियम विपरित प्रधानाध्यापक नियुक्त गरी आर्थिक लाभ लिन तल्लिन रहेका पनि देखिन्छ सामुदायिक विद्यालयमा । यस्तो पृष्ठभूमीमा “शिक्षकले राजनीति गर्न पाउँदैन, राजनीति गर्ने शिक्षकलाई कार्वाही हुन्छ“ भन्नु आफैमा एक गज्जबको ठट्टा बन्न पुगेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनसंगै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुने बाटोमा अगाडि बढि सकेको सन्दर्भमा अब शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान विकृतिको निर्मम समीक्षा हुन आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयमा धेरै समस्याहरु छन् । बर्षाै देखिको बेथिति र राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण चौपट् बनिरहेको सामुदायिक विद्यालयहरुको साख जोगाउन अव नियम बनाउने मात्र होइन कार्यान्वयनमा नै ल्याउन आवश्यक छ । विद्यालय समय भित्र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षक÷प्रधानाध्यापकलाई कार्वाही गर्न एक अधिकार सम्पन्न संयन्त्र तयार गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यमान व्यवस्थापन समितिले शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि तथा विद्यालयको भौतिक पक्ष सुधारमा अपेक्षाकृत काम गर्न सकेन । राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको सांघुरो चिन्तनबाट मुक्त हुन पनि सकेन विद्यालय व्यवस्थापन समिति । सरकारी अनुदान तथा स्थानीय तहको व्यवस्थापन रहने सामुदायिक विद्यालयमा अब मौजुदा विव्यसको विकल्पमा अधिकार सम्पन्न प्रधानाध्यापकको व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ ।
खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्यता र क्षमताको आधारमा सक्षम प्रधानाध्यापक छनौट गर्न सके विद्यालयमा राजनीति कम हुन सक्छ । यसो हुुँदा समितिको आशिर्वादबाट हुकुम प्रमाङ्गी शैलीमा प्रधानाध्यापक हुने “टिके प्रथाको“ पनि अन्त्य हुन जान्छ । अनि आफू अनकूल प्रधानाध्यापक बनाएर आर्थिक लाभ लिने तथा विद्यालयमा अनाबश्यक राजनीतिक पूर्वाग्रह साध्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गलत सोच पनि समाप्त हुन्छ ।
विद्यालय विकास प्रस्तावको आधारमा खूला विज्ञापनबाट सक्षम, योग्य र नेतृत्वलिन सक्ने अधिकार सम्पन्न प्रधानाध्यापकको व्यवस्था नै सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने एक भरपर्दाे विकल्प हो । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान जरुरी मात्र होइन अपरिहार्य समेत भइसकेको छ । अन्यथा सामुदायिक विद्यालयको स्थिति झन् विग्रदै जाने र “सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बालुवामा पानी” हुने निश्चित छ ।
प्रकाशित मिति २०७५ श्रावण १२ ,शनिबार
Binod Tamang8 months ago
लेखको मनसाय सामुदायिक विध्यालय सुधारको लागि मार्गदर्शन गर्ने हो कि? सामुदायिकको हुर्मत लिएर निजी विध्यालयको नाफाखोरहरुलाई लिस्नु लगाउने प्रयत्न गरेको हो? अहिले ६ वर्समा बच्चहरु २ कक्षामा पुग्छन ।६ वर्सका बच्चाले नेपाली जस्तो धेरै ब्यान्जन वर्नहरु Joint भएर बनेका शब्द र वाक्य हामीले झै खरर read गरोस भन्ने अपेक्षा नै असान्दर्भिक भएन र ? त्यही age का boarding school का student ले चाहिँ नेपाली खरर reading गर्छ ? सामुदायिकको २ class को जत्तिको nepali reading गर्न boarding को बच्चा class4मा पुगनु पर्छ, जुन बेला उसको उमेर कम्तिम9वर्स पुगेको हुन्छ । अर्को सामुदयिक जसले राम्रो गरेको छ उसलै अपबाद मात्र मान्ने? कत्ती वटा विध्यालयको study गरेर यो लेख लेख्नु भएको हो? सामुदायिकको बिग्रेको मत्र देखाउने अनि boarding को राम्रो पक्ष मात्र? दोस्रो दर्जको नगरिकलै हेपुवा पारामा दिएको तलब बाहेक के के का लागि कत्ती budget दिन्छ सरकारले सरकारी स्कूललाई? निशुल्कका ढ्वाङ पिटेर १ पैसा parents बाट नलिनु भन्ने सरकारले विध्यालयको आवश्यकता हेरेर budget दिएको छ कि छैन हेर्नू पर्यो नि। अनि निजि स्कूलले सयौ शीर्षकमा parents को ढाड सेक्ने गरि शुल्क लिएर दादागिरी गरेकोमा कसैको ध्यान नजाने?
जायश्व्र जैसी8 months ago
राम्रो बिचार छ ।
K r kafle8 months ago
एकदम मलाइ लागेको कुरो नि यहि हो ।यसमा अलिकति थपेर भन्दा ::जब सम्म शिक्षित र अनुशाशित ब्यक्ति हरुलाइ नेतृत्व तहमा पुर्याउदैनौ तब सम्म हाम्रो शैक्षिक स्तर र चालचलन यस्तै नै हो।